ကိုလူဩ: ဦးအေးမောင်၊ဗုဒ္ဓနှင်. ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ အခန်း(၄)၊ (ဂ) ဗုဒ္ဓ၏ဆုံးမနည်း
ဦးအေးမောင်၊ဗုဒ္ဓနှင်. ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ အခန်း(၄)၊ (ဂ) ဗုဒ္ဓ၏ဆုံးမနည်း
ဗုဒ္ဓသည် အိန္ဒိယပြည် မဇ္ဈိမဒေသ၌ ၄၅ နှစ်တိုင်တိုင် တရားဟောပြောခဲ.ရာ အထူးအောင်မြင်ကြောင်း ယုံမှားဖွယ်မရှိချေ။ ဗြာဟ္မာဏ၊ မင်းမှုးမတ်၊ သူဌေးသူကြွယ် မှစ၍ ဆတ္တာသည်၊ ဆင်းရဲသား၊ အလုပ်သမားအထိ လူတန်းစားအမျိုးမျိုးသည် ဗုဒ္ဓတရားကို နှစ်သက်ကြ၏။ ဗုဒ္ဓ၏ တရားကို တစ်ကြိမ်ကြားနာကာမျှဖြင်. ဗုဒ္ဓ၏ တပည်.အဖြစ်ခံယူသောသူတို.မှာ မနည်းလှချေ။ ဗုဒ္ဓ၏ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုသည် ထိုအခါက မဇ္ဈိမဒေသ၌ ဗြာဟ္မဏဝါဒ တန်ခိုးမကြီးသေးခြင်း၊ လူတို.အသိဥာဏ်ရင်.ကျက်၍ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်များ ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေခြင်း၊ ဗုဒ္ဓ၏ ဥပဓိရုပ်နှင်. သီလသမာဓိ ဂုဏ်ကို ကြည်ညိုကြခြင်း စသည်တို.ကြောင်. ဖြစ်၏။ ထိုအချက်များနှင်. ထပ်တူအရေးပါသော အချက်တစ်ရပ်မှာ ဗုဒ္ဓ၏ ဟောပြောဆုံးမနည်းဖြစ်၏။ သို.ဖြင်.နိဂဏ္ဍတစ်ဦးက ဗုဒ္ဓသည် သူတစ်ပါးကို မိမိဘက်ပါအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်သော ဥာဏ်ပညာ ကြွယ်ဝသည်ဟု ဆို၏။
ဗုဒ္ဓသည် ဘီစီ ၆ ရာစုခေတ် မတိုင်မီက လူများလက်ခံယုံကြည်ပြီးဖြစ်သော ဘဝသံသရာ၊ ကံတရား၊ အနိစ္စဒုက္ခတရား စသည်များနှင်. လူများနားလည်ပြီးဖြစ်သော ဝေါဟာရစကားများကို အခြေပြု၍ ဟောပြော၏။ သို.ရာတွင် ထိုရှေးဝါဒများ၊ စကားများသည် ဗုဒ္ဓဒေသနာ၌ အနက်အဓိပ္ပယ် ပြောင်းလဲလာ၏။ ဗုဒ္ဓလက်ခံသော ဘဝသံသရာ သည် ရှေးဗြာဟ္မဏတို.၏ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ တရားထက် နက်နဲကျယ်ပြန်.၏။ ဗြာဟ္မဏ ဟူသောစကားသည် ဇာတ်အနွယ်မြင်.မားမှုကို မဆိုလိုဘဲ အကျင်.သီလ မြင်.မြတ်မှုဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်၏။ 'ဗြဟ္မာ' သည် ပါဠိပိဋကတ်၌ အနန္ဒတန်ခိုးရှင်၊ (ဝါ) ထာဝရဘုရား သို.မဟုတ် ဥပနိသျှကျမ်းလာ ပရအတ္တ (Paramatma or Atman) ကို ရည်ညွန်းသောစကား မဟုတ်တော.ဘဲ အမြင်.မြတ်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းကို ဟောသောစကားဖြစ်လာ၏။ ဥပမာ- ဗြဟ္မဝိဟာရ, ဗြဟ္မစရိယ, ဗြဟ္မစက္က ။
ဗုဒ္ဓသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ စကားကို တိုက်ရိုက်မပယ်ဘဲ ထိုစကားကိုပင် သုံးစွဲ၍ ပရိယာယ်ဖြင်. ဟောပြောလေ.ရှိ၏။ လယ်ထွန်နေသော ဗြာဟ္မဏ တစ်ဦးက မိမိထံ ဆွမ်းခံသော ဗုဒ္ဓအား" အရှင်ရဟန်းသည် ကျွန်ုပ်ကဲ.သို. လယ်ထွန်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်စားပါသလော" ဟုဆိုရာ ဗုဒ္ဓက "ဗြာဟ္မဏ၊ ငါသည်လည်း လယ်ထွန်စိုက်ပျိုး၏။ ငါ၏သဒ္ဓါတရားသည် မျိုးစေ.ဖြစ်၏။ ဝိပဿနာပညာ၊ မဂ်ပညာသည် ထမ်းပိုးထွန်တုံးဖြစ်၏" စသည်ဖြင်. မိန်.ကြား၏ (ဗြာဟ္မဏသံယုတ် ကသိဘာရဒွါဇသုတ်)။ ပိဋကတ်စာပေ၌ ဤကဲ.သို.သော ဒေသနာမျိုး အမြောက်အမြားရှိ၏။ (From the known to unknown method= ပဋိလောမနည်းအရ ပြန်လည်သုံးသပ်ရှင်းပြနည်း။)
ဗုဒ္ဓသည် လူတို.အား ဟောပြောဆုံးမရာ၌ ဥပမာ အတော်များများ အသုံးပြုလေ.ရှိ၏။ ဥပမာများမှာ ထိထိမိမိရှိ၍ တရားဒေသနာကို သိမြင်နားလည်ရန် ထိရောက်သော အထောက်အကူဖြစ်၏။ မဟာဗြာဟ္မာကို တွေ.မြင်လိုသော ဝါသေဌလုလင်အား ဟောကြားရ၌ ဗုဒ္ဓက ဗြာဟ္မာဏတို.သည် ၎င်းသူတို.၏ ဆရာ.ဆရာ ခုနှစ်ဆက်တိုင်အောင်သော ဆရာ၊ လက်ဦးဆရာ၊ ဝေဒကျမ်းများကို စီရင်သော ရှေးရသေ.တို.သည် လည်းကောင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှပင် မဟာဗြာဟ္မာကို မျက်ဝါးဝါးထင်ထင် မမြင်ဘူးပါဘဲလျက် မဟာဗြဟ္မာနှင်. အပေါင်းအဖော်ဖြစ်လိုသည် ဆိုခြင်းမှာ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ဆွဲကိုင်ဆက်စပ်နေသော သူကန်းတို.တွင် ရှေ.ဆုံးလူသည် မမြင်ဈ အလယ်လူလည်းမမြင်၊ နောက်ဆုံးလူလည်းမမြင်သကဲ.သို. လည်းကောင်း၊ မည်သည်.အရပ်၌ပြသာဒ်ရှိသည်။ ထိုပြသာဒ်သည် မြင်.သည်၊နိမ်.သည်ဟု မသိဘဲ တက်ရန်လှေကားကို ပြုသည်နှင်.လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံ၌ အလှဆုံးမိန်းမကို ချစ်ကြိုက်ပါသည်ဟု ဆိုသော ယောက်ျားနှင်. သော်လည်းကောင်း တူလှချေသည်ဟု မိန်.တော်မူ၏။ (ဒီဃနိကာယ်၊ တေဝိဇ္ဖသုတ်)
သုတ္တန်များ၌ ဗုဒ္ဓအား သမဏဗြာဟ္မဏနှင်. ပရိဗိုဇ်တို.က မေးသော စကားများကို တွေ.ရ၏။ "အို ပုဏ္ဏား၊ ငါဆိုလတ္တံ.သော စကားကို သင် အဘယ်သို.ထင်သနည်း" စသောစကားကို နေရာအတော်များများ၌ တွေ.ရခြင်းအားဖြင်. တရားနာသူများ၏ မေးမြန်းခြင်းကို ဗုဒ္ဓလိုလားကြောင်း သိအပ်၏။ မိလိန္ဒမင်းကဲ.သို. နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်မေးမြန်းတသော သူမျိုးကို ပိဋကတ်စာပေ၌ မတွေ.ရခြင်းမှာ ထိုသူတို.၏ စကားကို ဗုဒ္ဓစကားလောက် ပိဋကတ်ဆရာတို.က ဂရုမပြုခဲ.ကြသောကြောင်. ဖြစ်တန်ရာ၏။
တရားဟောရာ၌ ဗုဒ္ဓအသုံးပြုသော ထူးခြားသော နည်းစနစ်မှာ ပြဿနာတစ်ခုကို တိုက်ရိုက်မဖြေရှင်းဘဲ အထက်ပါတေဝိဇ္ဖသုတ်မှာကဲ.သို. မေးသူအား စေ.ငုသေချစွာ ပြန်လည်မေးမြန်းစိစစ်ခြင်းဖြင်. အမြင်မှန် ရရှိစေသောနည်းဖြစ်၏။ နောက်ကာလ၌ ထိုနည်းအားအသုံးပြုသော ဂရိပညာရှိကြီးတစ်ဦးကို အစွဲပြု၍ ဆိုကရေတိနည်း (Socratic Method) ဟု ထင်ရှားသော ဗုဒ္ဓသင်ပြဆုံးမနည်းမှာ မှတ်သားဖွယ်ကောင်း၍ ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဒေသနာတစ်ခုကို ဖော်ပြပါအံ.။ ထိုဒေသနာသည် ဇာတ်ဝါဒကို ချေပသော ဒေသနာဖြစ်သော်လည်း မိဘမျိုးရိုး စစ်မှန်မှုနှင်. လူမျိုးခွဲခြားမှု၌ အစွဲကြီးသော ယခုခေတ် လူတို.ဆင်ခြင်စဉ်းစားဖွယ်ဖြစ်၏။
ရှေးအခါက ဗြဟ္မဏရသေ.ခုနှစ်ဦးသည် ဗြာဟ္မဏအမျိုးသာလျှင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အမျိုးစင်ကြယ်၍ ဗြဟ္မာ၏ သားများဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။ ဘုရားအလောင်း အသိတဒေဝလ ဆရာရသေ.သည် ရသေ.တို.ကို ဆုံးမလိုသောကြောင်. "ဗြာဟ္မဏ တို.၏ မိခင်တို.သည် အခြားသူများနှင်. မပေါင်းဖော်ဘဲ ဗြာဟ္မဏယောက်ျားများနှင်.သာ ပေါင်းဖော်သည်ဟု သင်တို.သိကြပါ၏လော" ဟု မေး၏။ ရသေ.တို.က " ကျွန်ုပ်တို. မသိပါ" ဟု ပြန်ဖြေကြ၏။
(မေး) ဗြာဟ္မဏ တို.၏ အထက်ဆွေခုနှစ်ဆက်မှ မိန်းမများသည် ဗြာဟ္မဏအမျိုးသားမှတစ်ပါး အခြားအမျိုးသားများနှင်. မပေါင်းဖော်ဟူ၍ သင်တို.သိကြပါသလော။
(ဖြေ) ကျွန်ုပ်တို. မသိကြပါ။
(မေး) ဗြာဟ္မဏ တို.၏ ဖခင်တို.သည်လည်းကောင်း၊ အထက်ခုနှစ်ဆက် ယောက်ျားများသည် လည်းကောင်း၊ ဗြာဟ္မဏမိန်းမများမှတစ်ပါး အခြားမိန်းမများနှင်.
(မေး) သတ္တဝါ တစ်ဦး မည်သို. ပဋိသန္ဓေတည်သည်ကို သင်တို. သိကြပါသလော။
(ဖြေ) အမိနှင်.အဖ ပေါင်းဖော်ခြင်း၊ အမိ၏ ရာသီဥတုလာခြင်း၊ ဂန္ဓဗ္ဗအသင်.ရှိနေခြင်းဟူသော အကြောင်းသုံးခု တိုက်ဆိုင်သောအခါ သတ္တဝါတစ်ဦး ပဋိသန္ဓေ
(မေး) သို.ရာတွင် ဂန္ဓဗသည် အမျိုးလေးပါးတွင် မည်သည်.အမျိုးဖြစ်မည်ဟု သင်တို.သိကြပါသလော။
(ဖြေ) ကျွနု်ပ်တို. မသိပါ။ (မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ အဿလာယသနသုတ်)
တရားဟောပြောရာ၌ ဗုဒ္ဓ လက်ကိုင်ထားသော ဝါဒမှာ ဝိဘဇ္ဇဝါဒဖြစ်၏။ ဝိဘဇ္ဇဝါဒသည် ခွဲခြားစိစစ်ခြင်းအနက်ကို ဟော၏။ သုဘလုလင်သည် ရဟန်းဘဝနှင်. အိမ်ရာထောင်သော သူ၏ဘဝတွင် မည်သူ၏ ဘဝကို ပို၍ မြတ်ပါသနည်းဟု မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက " အိုလုလင်၊ ငါသည် အရာရာ၌ ဝေဖန်ခွဲခြား၍ ဆိုလေ.ရှိ၏။ တစ်ခုခုကို သာ မုချဟူ၍ ဆိုလေ.မရှိ" စသည်ဖြင်.မိန်.ကြား၏။ ဗုဒ္ဓ၏ အလိုအားဖြင်. အမြဲမှန်ကန်သည် ဟူ၍ လှေနံဓားထစ် စွဲမြဲယုံကြည် ရမည်.စကား မည်သည်မရှိ။ " ရဟန်းတို.၊ ဤအယူသည်သာမှန်၏။ အခြားအယူအားလုံးသည် အချည်းနှီးသာတည်းဟူ၍ မစွဲမှတ်သင်." ဟူသောစကားမှာ ပိဋကတ်စာပေ၌ အကြိမ်ကြိမ်တွေ.ရသော ဗုဒ္ဓဩဝါဒဖြစ်၏။
သို.ဖြစ်၍ အချို.သော ဗုဒ္ဓဒေသနာများ တစ်ခုနှင်.တစ်ခု ဆန်.ကျင်သယောင်ဖြစ်နေခြင်းမှာ အံ.ဩစရာမရှိချေ။ အချို.ဒေသနာများ၌ အဖော်မရှာဘဲ တစ်ကိုယ်တည်း နေခြင်းကို ချီးမွမ်း၍ အခြားဒေသနာများ၌မူ မိတ်ဆွေကောင်းရှိရန် လိုအပ်မှုကို လေးထားဟော၏။
(တော်တော် စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ. အချက်ပဲ။ အချို.ဘာသာခြားပညာရှင်များက ဗုဒ္ဓရဲ. စကားတွေဟာ ပိဋကတ်ထဲမှာဘဲ ရှေ.သွားနောက်လိုက်မညီဘူး လို.ဆိုကြပါတယ်။
အခု လို ကြတော.လည်း ဗုဒ္ဓကို ပိုလို.တောင်ကြည်ညိုလာစေပါတယ်။ Blog Post တင်သူ)
ရဟန်းတို.အား ဆိတ်ဆိတ်နေရန် ဗုဒ္ဓက မကြာခဏ မိန်.ကြားလေ.ရှိသော်လည်း ဝါတွင်းသုံးလ၌ အပြစ်မကျူးလွန်မိရန် အချင်းချင်း စကားမပြောဘဲနေသော ရဟန်းတို.မှာ ဗုဒ္ဓ၏ ကဲ.ရဲ.ပြစ်တင်ခြင်းကို ခံရကြောင်း ဝိနည်းပိဋကတ်၌ ပြဆိုထား၏။ (ဤအကြောင်းကို အကျင်.သီလ ဆိုင်ရာ အခန်း၌ အကျယ်ဖော်ပြပါအံ.။)
ဗုဒ္ဓ၏ ဆုံးမနည်းနှင်. စပ်လျဉ်း၍ အဘယမင်းသားအား မိန်.ကြားချက်သည် မှတ်သားဖွယ်ကောင်း၏။ ဗုဒ္ဓက မိမိသည် မမှန်၊ အကျိုးမရှိ၊ သူတစ်ပါးလည်း မနှစ်လိုသော စကားကို ရှောင်ကြင်၏။ လူများက နှစ်သက်သော်လည်း မမှန်၊ အကျိုးမရှိသော စကားကို မပြော၊ မှန်၍ လူအများနှစ်သက်သော်လည်း အကျိုးမရှိသောစကားကို ရှောင်ကြဉ်၏။ သူတစ်ပါးမနှစ်လိုသော်လည်း မှန်၍ အကျိုးရှိသော စကားမျိုးနှင်. သူတစ်ပါးလည်း နှစ်လို ၊ မှန်လည်း မှန်၍ အကျိုးလည်းရှိသော စကားမျိုးကို အချိန်အခါကို ကြည်.၍ ဟောပြောသည်ဟု မိန်.တော်မူ၏။ (မဇ္ဈိမ နိကာယ်၊ အဘယရာဇကုမာရသုတ်)
ကြားနာသူအဖို. အကျိုးရှိမည်. တရားစကားဟူသည် လောကီကြီးပွားချမ်းသာ သို.မဟုတ် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် ရရှိမှုကို အကျိုးပြုသော စကားများဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှား၏။အခါတစ်ပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် သစ်ရွက်များကို လက်ဝါးပေါ်၌ တင်ပြ၍ ရဟန်းတို.အား မိမိလက်ထဲရှိသစ်ရွက်များနှင်. နှိုင်းစာသော် တောထဲရှိ သစ်ရွက်များမှာ အလွန်များပြားသကဲ.သို. မိမိသိသော်လည်း မဟောဘဲထားသော တရားများမှာ အလွန်များပြားကြောင်း၊ သစ္စာလေးပါးမှ တစ်ပါး အခြားတရားများမှာ သံသရာမှ လွတ်မြောက်ကြောင်း တရားများမဟုတ်သဖြင်. မဟောဘဲထားခဲ.ကြောင်းမိန်.ကြား၏။ (မဟာဝဂ္ဂသံယုတ် ၊ သိံသပါသုတ်)။
ပရိဗိုဇ် တို.မေးလျှောက်သော မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်နှင်. လုံးဝမသက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများကို ဖြေတော်မမူချေ။ ဆင်းရဲဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်မှု အတွက် သိသင်.သိထိုက်သော တရားများကို မူ ဆရာစားမထားဘဲ၊ (ဝါ) ဘာမျှ ခြွင်းချန်မထားဘဲ ဟောကြားခဲ.ကြောင်း မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်၌ မိန်.ကြား၏။ " ရဟန်းတို.၊ လောက၌ မိန်းမတို.သည်လည်းကောင်း၊ ပုဏ္ဏားတို.၏ အတတ်ပညာသည် လည်းကောင်း လျှို.ဝှက်သော သဘောရှိကြ၏။ လပြည်.ဝန်း၊ နေဝန်းနှင်. ငါဘုရား၏ တရားမှာကား လျှို.ဝှက်ခြင်းမရှိဘဲ ပွင်.လင်းသော သဘောရှိ၏။" (အင်္ဂတ္တရ- တိကနိပါတ၊ပဋိစ္ဆန္နသုတ်)
သူတစ်ပါးမနှစ်လိုသော စကားမျိုးကို ဗုဒ္ဓအထူးရှောင်ကြဉ်လေ. ရှိခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဒေသနာများ၌ ထင်ရှား၏။ မိမိ၏ သဗ္ဗညုတဥာဏ်မှာ လူအများထင်သကဲ.သို. ဘာမဆို ထာဝရသိနေသော ဥာဉ်မျိုးမဟုတ်ကြောင်း အတိအလင်း ဖွင်.ဟမိန်.ကြားခဲ.သော်လည်း (ဆိုင်ရာသုတ္တန်ကို 'ဗုဒ္ဓကိုးကွယ်မှု' အခန်း၌ ဖော်ပြပါအံ.) ဗုဒ္ဓသည် ထိုဥာဏ်မျိုးရှိသည် ဆိုသော အခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကို မည်သို.မျှ ဖြေတော်မမူချေ။ (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ နဝကနိပါတ်- လောကာယတိက ဗြာဟ္မဏသုတ်)။
အခြားလူတစ်ဦးက မက္ခလိဂေါသာလ နှင်. နာဋပုတ္တ တို.သည် သူတို.ကြေညာသည်.အတိုင်း တရားအားလုံးကို သိကြပါသလော ဟု မေးသောအခါ၌လည်း ဗုဒ္ဓက "သင်၏ မေးခွန်းသည် မသင်.လျော်ချေ။ သင်၏ အမေးစကားကို ထားဘိလော" ဟုဆို၍ မိမိ၏တရားကို ဟောကြား၏။(မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ စူဠသာရောပမသုတ်)
ဗုဒ္ဓသည် မိမိနှင်.စင်ပြိုင် အခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကို အမြဲထောက်ထားစာနာ၍ မိမိကြောင်. ထိုသူများ ထိခိုက်နစ်နာမည်ကို မလိုလားချေ။ ဂျိန်းဝါဒကို စွန်.၍ မိမိ၏တပည်. အဖြစ်သို.ခံယူသော ဥပါလိသူကြွယ်နှင်. သီဟစစ်သူကြီးတို.အား ဂျိန်းရဟန်း တို.ကို ဆက်လက်လှူဒါန်းရန် သတိပေး၏။ (မဇ္ဈိမနိကာယ်- ဥပါလိသုတ်နှင်. ဝိနည်း- မဟာဝဂ္ဂခန္ဓက)။ ပရိဗိုဇ် တစ်ဦးအား ဟောကြားရာ၌ "ငါသည် သင်တို.ကို ငါ၏တပည်. ဖြစ်စေလို၍ သို.မဟုတ် သင်တို.၏ ဆရာနှင်. ကျင်.စဉ်ကို ပစ်ပယ်စေလို၍ ဟောပြောသည်ဟု မထင်မှတ်လင်.။ သင်တို.၏ ဆရာသာလျှင် သင်တို.၏ ဆရာဖြစ်ပါစေ။ သင်တို.၏ ကျင်.စဉ်သာလျှင် သင်တို.၏ ကျင်.စဉ်ဖြစ်ပါစေ" ဟု မိန်.ကြား၏။
တရားဟောပြောရာ၌ ဗုဒ္ဓသည် ကြားနာသူ၏ ဥာဏ်ပညာ အနုအရင်.ကို ကြည်.၍ ဟောပြောလေ.ရှိ၏။ ရွာသူကြီးတစ်ဦးက ဗုဒ္ဓသည် လူတို.အား အတန်းအစား မခွဲခြားဘဲ တရားဟောပြောပါသလော ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ရဟန်းသံဃာမှာ မြေဩဇာ ကောင်းသော ပထမတန်းစား လယ်မြေနှင်.တူကြောင်း၊ ဥပါသကာ, ဥပါသကာမ တို.မှာ ဒုတိယတန်းစားလယ်မြေနှင်.တူ၍ ဗုဒ္ဓဝါဒီ မဟုတ်သူများမှာ တတိယတန်းစား လယ်မြေနှင်.တူကြောင်း၊ လယ်သမားသည် ပထမတန်းစား လယ်မြေကို ရှေးဦးစွာ ထွန်ယက်သည်။ ထို.နောက်မှ ဒုတိယတန်းစားလယ်မြေကို ထွန်ယက်ပြီးလျှင် တတိယတန်းစားလယ်မြေကို နောက်ဆုံးမှ ထွန်ယက်သကဲ.သို. ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိးကို ခွဲခြား၍ ဟောပြောဆုံးမရကြောင်း မိန်.ကြား၏။ (သံယုတ္တနိကာယ်၊ ဂါမဏိသံယုတ်- ဒုတိယအသိဗန္ဓက ပုတ္တဂါမဏိသုတ်)
မြင်းဆရာတစ်ဦးက မိမိသည် မြင်းများကို ယဉ်ပါးအောင်ပြုလုပ်ရာ၌ အချို.မြင်းများကို အနုနည်းဖြင်.၊ အချိ.မြင်းများကို အကြမ်းနည်းဖြင်. ယဉ်ပါးစေရပါသည်။ အနုနည်း အကြမ်းနည်းများဖြင်. ယဉ်ပါးအောင်လုပ်၍မရသော မြင်းများကိုကား ဖျက်ဆီးပစ်ရပါသည်ဟု လျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက မိမိသည်လည်း လူများကို ယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမရာ၌ ထိုနည်းသုံးမျိုးကို သုံးသည်။ သုစရိုက်မှုများ၏ အကျိုးကို ညွန်ပြခြင်းသည် အနုနည်း ဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုစရိုက်မှုများ၏ အပြစ်ကို ညွှန်ပြခြင်းသည် အကြမ်းနည်း ဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းနှစ်နည်းဖြင်. ဆုံးမ၍မရသောသူကို လျစ်လျူရှုရသည်။ ထိုသို. လျစ်လျူရှုခြင်းသည် ထိုသူအား အကျိုးစီးပွား ဆုတ်ယုတ်စေသောကြောင်. သူ.အား ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်ဟု မိန်.ကြား၏။ (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ စတုက္ကနိပါတ်- ကေသိအဿဒမ၁မသာရထိသုတ်)
ဗုဒ္ဓသည် ကျွတ်ထိုက်သော ဝေနေယျသတ္တဝါတို.ကို ဦးစားပေး၍ ဟောပြော၏။ ဤအချက်နှင်.ဆိုင်သော သုတ္တန်ဒေသနာမှာ ရှင်းလင်းပြတ်သား၍ အလွန်မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောကြောင်. ပြည်.ပြည်.စုံစုံ ဖော်ပြပါအံ.။
"ရဟန်းတို.၊ လောက၌ သူနာသုံးမျိုးထင်ရှားရှိ၏။ ပထမသူနာသည် သင်.လျော်သော အစားအစာ၊ ဆေးနှင်. သူနာပြုကို ရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရရှိသည်ဖြစ်စေ ရောဂါဝေဒနာမှ အထမမြောက်၊ ဒုတိယသူနာသည် သင်.လျော်သောဆေး၊ အစားအစာနှင်. သူနာပြုကို ရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရရှိသည်ဖြစ်စေ ရောဂါဝေဒနာမှ ထမြောက်၏။ တတိယသူနာသည်ကား သင်.လျော်သော ဆေး၊ အစားအစာနှင်. သူနာပြုကို ရရှိမှသာလျှင် ရောဂါဝေဒနာမှ ထမြောက်၏။ ယင်းတို.ကို မရရှိပါက ရောဂါမှ မထမြောက်နိုင်ချေ။
ရဟန်းတို.၊ ထိုသူနာသုံးမျိုးတွင် နောက်ဆုံး တတိယသူနာအား လျှောက်ပတ်သော ဆေး၊ ဆွမ်း နှင်. သူနာပြုတို.ကို ငါခွင်.ပြု၏။ ဤသူနာကို အကြောင်းပြု၍ အခြားသူနာတို.ကိုလည်း လုပ်ကျွေးပြုစုအပ်၏။
ရဟန်းတို.၊ ထိုနည်းအတူ လောက၌ သူနာနှင်.တူသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးရှိ၏။ ပထမပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရားရှင်ကို ဖူးမြော်ရသည်ဖြစ်စေ၊ မဖူးမြော်ရသည်ဖြစ်စေ တရားတော် ကို ကြားနာရသည် ဖြစ်စေ၊ မကြားနာရသည်ဖြစ်စေ အရိယာမဂ်သို. သက်ဝင်မည်မဟုတ်။ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရားရှင်ကို ဖူးမြော်၍ တရားတော်ကို ကြားနာရသည်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားရှင်ကို မဖူးမြော်ရ၊ တရားတော်ကို မကြားနာရသည်ဖြစ်စေ အရိယာမဂ်သို. သက်ဝင်မည်ဖြစ်၏။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား ဘုရားရှင်ကို ဖူးမြော်၍ တရားတော်ကြားနာရမှသာလျှင် အရိယာမဂ်သို. သက်ဝင်မည်ဖြစ်၏။ ဘုရားရှင်ကို မဖူးမြော်ရ၊ တရားကို မကြားနာရပါက အရိယာမဂ်သို. သက်ဝင်မည်မဟုတ်။
"ရဟန်းတို.၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးတွင် နောက်ဆုံး တတိယပုဂ္ဂိုလ်အား တရားဟောခြင်းကို ငါခွင်.ပြု၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို အကြောင်းပြု၍ အခြားသူတို.အားလည်း တရားဟောကြားအပ်၏။" (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ တိကနိပါတ်၊ ဂိလာနသုတ်)
ဤဒေသနာ၌ ဗုဒ္ဓဝါဒသည် အမှန်တရားကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းစာ ကိုးကွယ်မှုဝါဒ မဟုတ်ကြောင်းထင်ရှား၏။ ဗုဒ္ဓသည် ကျွတ်ထိုက်သော သူတို.ကို ဦးစားပေး၍ ဟောပြောသော်လည်း မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်နှင်. ဝေးသောသူတို.ကို လျစ်လျူမပြုချေ။ သူတို.စရိုက်ကို ကြည်.၍ သင်.လျော်သောတရားကို ဟောလေ.ရှိ၏။ သူတို.၏ မူလရှိရင်းစွဲ ယုံကြည်ချက်ကို ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်း မပြုဘဲ အမှန်တရားကို သိမ်မွေ.စွာ ထောက်ပြလေ.ရှိ၏။ ဂင်္ဂါမြစ်ထဲ၌ ရေချိုးခြင်းဖြင်. မကောင်းမှုအညစ်အကြေး ကင်းစင်သည်ဟု ယူဆသော ဗြာဟ္မဏတစ်ဦးအား အပြစ်မတင်ဘဲ "ဤအယူမှာ သင်တို.၏ အယူဖြစ်သည်။ ငါ၏ သာသနာ၌မူ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးသည် ကိလေသာအညစ်အကြေး စွန်.ပစ်ရာ ရေအိုင်ဖြစ်သည်" စသည်ဖြင်. ဟောကြား၏။( သံယုတ္တနိကာယ်၊ ဗြာဟ္မဏသံယုတ်၊ သင်္ဂါရဝဗြာဟ္မဏသုတ်)
ထိုသို. အခြားအယူဝါဒများအပေါ်၌ ဗုဒ္ဓ၏ သဘောထားကြီးမှုသည် ဗုဒ္ဓဒေသနာများကို လေ.လာရာ၌ ကျွန်ုပ်တို. သတိပြုရမည်. အချက်ဖြစ်၏။ အဘယ်ကြောင်.ဆိုသော် ဗုဒ္ဓက မည်သို.မျှ မဝေဖန်ဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေမှုကြောင်. ပိဋကတ်ထဲသို. မသိမသာ ဝင်ရောက်၍ ဘုရားဟော တရားယောင်ယောင် ဖြစ်နေသော အယူဝါဒများ ရှိရပေမည်။ ဥပမာ " မိဘတို.က သားသမီး အလိုရှိကြခြင်း၏ အကြောင်းတစ်ပါးမှာ ဘဝတစ်ပါးသို. ပြောင်းသွားကုန်သော ငါတို.အား အလှူ၏ အဖို.ကို ပေးဝေလတ္တံ. ဟူုသော ယုံကြည်ချက်ဖြစ်၏" ဟူသောစကား (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ ပဉ္စကနိပါတ်- ပဉ္စဌာနသုတ်) ဖြင်. ထိုယုံကြည်ချက်သည် ဗုဒ္ဓမပေါ်မီက ရှိနှင်.ပြီးဖြစ်၍ နောက်မှ ဗုဒ္ဓစာပေထဲသို. ဝင်ရောက်လာသော စကားဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှား၏။
(ဒီအကြောင်းအရာကတော. ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ဗုဒ္ဓဟောတဲ. အနတ္တတရား၊ ကမ္မဝါဒ တွေနဲ. ဝိရောဓိ ဖြစ်နေလို.ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီ အခန်းတွေ ဖတ်ပြီး ရင် ဒီအကြောင်း အရာက ရှင်းသွားပါလိမ်.မယ်။Blog Post တင်သူ)
ကျွတ်ထိုက်သော (ဝါ) အသိဥာဏ်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တို.ကို ဟောပြောဆုံးမရာ၌မူ ဗုဒ္ဓသည် ရှေးအစဉ်အလာ ယုံကြည်ချက်များနှင်. ပတ်သက်၍ ပွင်.လင်းပြတ်သား၏။ ဇာတ်ဝါဒကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် မရှုတ်ချသော်လည်း ရဟန်းဘောင်၌ ထိုဝါဒကို လုံးဝလက်မခံချေ။ ရဟန်းတို. သည် အင်္ဂဝိဇ္ဇာ၊ ယတြာ၊ ဗေဒင်၊ ဓာတ်ရိုက်ခြင်းစသော လောကီအတတ်ပညာများကို လေ.လာသင်ကြား ပို.ချခြင်း မပြုကြရချေ (သုတ္တနိပါတ်တုဝဋကသုတ်နှင်. ဝိနည်းစူဠခန္ဓက)။ " နက္ခတ်ကို ငံ.လင်.သော သူမိုက်အား အကျိုးသည်ယုတ်၏။ ကောင်းကင် ကြယ်နက္ခတို.သည် အဘယ်အကျိုးပြုလတ္တံ.နည်း" (ဧကနိပါတ် နက္ခတ္တဇာတ်)။ မင်္ဂလာရှိသော အမည်ကို အလိုရှိသည်. ရဟန်းတစ်ပါးအား အမည်နာမမည်သည် ပညတ်မျှသာဖြစ်၍ အမည်ဖြင်.ကိစ္စပြီးသည် မဟုတ်။ အလုပ်လုပ်မှသာ ကိစ္စပြီးကြောင်း ဟောကြား၏။ (ဧကနိပါတ် နာမသိဒ္ဓိဇာတ်)
အခါတစ်ပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းအပါင်း ခြံရံလျက် တရားဟောနေစဉ် ရုတ်တရက် ချေဆတ်တော်မူ၏။ ထိုအခါရဟန်းတို.က "ဇီဝတု၊ အရှင်ဘုရားသည် အသက်ရှည်စွာ နေရပါစေသတည်း" ဟုဆိုကြ၏။ ဗုဒ္ဓက "ရဟန်းတို. ၊ ချေဆတ်သော သူကို ဇီဝတုဟု ဆိုကာမျှဖြင်. အသက်ရှည်မည်မဟုတ်ကြောင်း ရဟန်းတို.က လျှောက်သော် ဗုဒ္ဓက " သို.ဖြစ်လျှင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချေဆတ်သောအခါ ဇီဝတုဟုဆိုသော ရဟန်းအား ဒုက္ကဋ် အာပတ်သင်.စေ" ဟု ပညတ်တော်မူ၏။ (ဝိနည်းပိဋကတ်၊ စူဠခန္ဒက)
ဗုဒ္ဓ၏ အထိရောင်ဆုံး သင်ပြဆုံးမနည်းမှာ ကိုယ်တော်တိုင် နမူနာစံပြမှုဖြစ်၏။ ငါဘုရားကို မြင်သောသူသည် တရားကို မြင်သည် ဆိုသောစကားမှာ မှန်လှ၏။ ဗုဒ္ဒ၏ ကြင်နာသိမ်မွေ.သော အပြောအဆို၊ အပြုအမူနှင်. စိတ်နေသဘောထားသည် များစွာစော လူတို.ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ကြောင်း ယုံမှားစရာမရှိချေ။ မူလပထမက ရန်လိုသော သူတို.သည်ပင် နောက်ဆုံး၌ ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုလေးစားလာကြ၏။
မိမိကို ဆဲရေးသော ဗြာဟ္မဏတစ်ဦးအား ဗုဒ္ဓက သည်းခံ၍ ဟောပြောဆုံးမသော စကားသည် အထူးမှတ်သားဖွယ်ကောင်း၏။ ဗုဒ္ဓက " ဗြာဟ္မဏ၊ သင်သည် သင်၏ထံသို.လာသော ဆွေမျိုးသားချင်းတို.အား ခဲဖွယ်ဘောဇဉ် ပေးကမ်းသည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုသူတို.သည် သင်ပေးကမ်းသည်ကို မခံယူပါက ထိုစားဖွယ်ခဲဖွယ်များသည် သင်.အဖို.သာလျှင်ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလော။ ထ်ို.အတူ သင်၏ ဆဲရေးခြင်းကို ငါတို.ကတုံ.ပြန်ခြင်းဖြင်. မခံယူကုန်။ ထိုသို.မခံယူသဖြင်. သင်၏ဆဲရေးခြင်းသည် သင်.အဖို.သာလျှင်ဖြစ်သည်" စသည်ဖြင်.မိန်.ကြား၏။ ထိုဗြာဟ္မဏသည် ရဟန်းပြု၍ နောက်ဆုံး၌ ရဟန္တာဖြစ်သွား၏။ (သံယုတ္တနိကာယ်၊ ဗြဟ္မဏသံယုတ်- အက္ကောသ ဘာရဒွါဇသုတ်)
တခါသော် ဗုဒ္ဓသည် သစ္စကပရိဗိုဇ်အား တရားဟော၏။ တရားဟောနေစဉ် သစ္စကပရိဗိုဇ်သည် တစ်ခါတစ်ရံ ကြားဖြတ်၍ " အရှင်ဂေါတမသည် နေ.အခါ၌ အိပ်စက်သည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုသို.အိပ်စက်ခြင်းကို မောဟဖုံးလွှမ်း၍ တွေဝေနေခြင်းဟု အချိုသော သာမဏဗြာဟ္မဏတို.က ဆိုကုန်သည်" စသည်ဖြင်. ပြက်ရယ်ပြု၏။ ထိုသို. မထီမဲ.မြင် ပြက်ရယ်ပြုခြင်းကို ခံရသော်လည်း ဗုဒ္ဓသည် စိုးစိမျှမတုန်လှုပ်ဘဲ ဆက်လက်၍ တရားဟော၏။ တရားပြီးဆုံးသွားသောအခါ၌လည်း သစ္စကသည် ဗုဒ္ဓတရားကို ကြိုက်နှစ်သက်ဟန်မရှိ။ ဗုဒ္ဓ၏ တပည်.အဖြစ်ကို မခံယူ။ သို.ရာတွင် ဗုဒ္ဓ၏ သည်းခံနိုင်မှုကို များစွာအံ.ဩရကား " အို…အရှင်ဂေါတမ၊ အံ.ဩဖွယ်ကောင်းလှပါပေ၏။ ကျွန်ုပ်သည် ပုရာဏကဿပ၊ အဇိတကေသကမ္ဗလ စသော ဆရာတို.နှင်. စကားပြောဆိုဖူးပါ၏။ သူတို.သည် ကျွန်ုပ်၏စကားကို မနှစ်သက်ပါက ဒေါသထွက်သော အမူအရာ၊ နှလုံးမသာသော လက္ခဏာကို ထင်စွာပြကြပါ၏။ အရှင်ဂေါတမမူကား ကျွန်ုပ်က ထိပါးပုတ်ခတ်၍ ပြောပါသော်လည်း အရေအဆင်းသည် ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် တောက်ပ၏။ မျက်နှာအဆင်းသည် ကြည်လင်၏။ ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူထိုက်သော ဘုရား၏ ကြည်လင်ခြင်းကဲ.သို. ပါတည်း" စသည်ဖြင်. ချီးကျူပြောဆိုလေသည်။ (မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ မဟာသစ္စကသုတ်)
မထေရ်တစ်ပါးသည် မိမိကြုံတွေ.ခဲ.ရသော ဗုဒ္ဓ၏ ကြင်နာမှုကို မမေ.နိုင်ချေ။ ထိုမထေရ်သည် ရဟန်းမပြုမီက အိမ်မှနှင်ထုတ်ခံရသဖြင်. ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးသော ကျောင်း၏ ဥယျာဉ်တံခါးဝ၌ နေရ၏။ ဗုဒ္ဓသည် သူ.ကို ကြင်နာစွာ ပွတ်သပ်၍ လက်ကို ကိုင်ပြီးလျှင် ကျောင်းဥယျာဉ်ထဲသို. ခေါ်သွား၏။ ထို.နောက် ခြေဆေး၍သုတ်ရန် ပုဆိုးကြမ်းတစ်ထည်ပေးတော်မူ၏။ (ထေရဂါထာ၊ ပန္တက မထေရ် ဝတ္ထု)
ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းသံဃာတို.၏ ချမ်းသာမှုကို လိုလား၏။ ဝါကျွတ်သောအခါ မိမိအားဖူးမြော်ရန် ရပ်ဝေးမှလာကုန်သော ရဟန်းတို.အား ကျန်းမာချမ်းသာစွာ နေခဲ.ကြပါ၏လော။ အခက်အခဲမရှိဘဲ ဆွမ်းရကြပါ၏လော စသည်ဖြင်. မေးမြန်းလေ.ရှိ၏။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျောင်းစဉ်လှည်.လည်၍ ရဟန်းတို.၏ နေရေးထိုင်ရေး အခြေအနေကို ကြည်.ရှုတော်မူလေ.ရှ်ိ၏။
တစ်ခါသော် ရဟန်းတစ်ပါးသည် ဝမ်းသက်ရောဂါဖြစ်၍ မိမိကျင်ကြီးကျင်ငယ်၌ လူးလိမ်.လျက် အိပ်ရ၏။ ဗုဒ္ဓသည် အရှင်အာနန္ဒာနှင်.အတူ ကျောင်းစဉ်လှည်.လည်ရင်း ထိုသူနာရဟန်းကိုမြင်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးလျှင် အရှင်အာနန္ဒာအား " အာနန္ဒာ၊ သွားချေ။ ရေယူဆောင်ခဲ.လော။ ဤရဟန်းကို ရေချိုးကုန်အဲ." ဟု မိန်.တော်မူ၏။ ထို.နောက် အရှင်အာနန္ဒာနှင်.အတူ ရဟန်း၏ကိုယ်ပေါ်သို. ရေသွန်းလောင်း၍ ဆေးကြောပေး၏။ ဆေးကြောပြီးသော် ဗုဒ္ဓနှင်. အရှင်အာနန္ဒာတို.သည် သူနာရဟန်းကို ချီမ၍ ညောင်စောင်းပေါ်၌ တင်ထားကြ၏။ ထို.နောက် ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတို.ကို စည်းဝေးစေပြီးလျှင် "ရဟန်းတို.၊ သင်တို.အား လုပ်ကျွေးမည်. အမိအဖတို. မရှိကြကုန်။ သင်တို.သည် အချင်းချင်း မလုပ်ကျွေးလျှင် အဘယ်သူသည် လုပ်ကျွေးလတ္တံ.နည်း။ ငါဘုရားအား လုပ်ကျွေးသောရဟန်းသည် နာဖျားသောရဟန်းအားလည်း လုပ်ကျွေးရာ၏" စသည်ဖြင်. ဟောတော်မူ၏။ (ဝိနည်းပိဋကတ်၊ မဟာခန္ဓကသုတ်)
ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်၌ ဗုဒ္ဓ၏ မေတ္တာကရုဏာကြီးမားပုံကိုပြသော အခြားဖြစ်ရပ်များ ရှိခဲ.တန်ရာ၏။ ယင်းတို.ကို ပိဋကတ်စာပေ၌ များများစားစားမတွေ.ရခြင်းမှာ ပိဋကတ်ဆရာများက ဗုဒ္ဓ၏ဘဝဖြစ်စဉ်ကို ဒေသနာများလောက် ဂရုမပြုခဲ.ကြသောကြောင်.ဖြစ်ရပေမည်။ အထက်ပါဖြစ်ရပ်သည် ပင် မိမိနှင်. သီတင်းသုံးဖော် သူနာရဟန်းကို လုပ်ကျွေးပြုစုရန် ပျက်ကွက်သော ရဟန်းအား ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင်.စေဟု အဘယ်ကြောင်. ဗုဒ္ဓက ပညတ်ခဲ.ကြောင်း ဖော်ပြရန် ဝိနည်းပိဋကတ်၌ ထည်.သွင်းထာခဲ.ကြဟန်တူ၏။ အကယ်၍ ထိုပညတ်ချက် မရှိခဲ.ပါမူ ဗုဒ္ဓက သူနာရဟန်းတစ်ပါးအား ကိုယ်တိုင်ကြင်နာစွာ ပြုစုတော်မူသော သာဓကကို ပိဋကတ်၌ ကျွန်ုပ်တို. တွေ.ရမည်မဟုတ်ချေ။
Posted by ကိုလူဩ at 8:04 AM